YeKyawAungMDY: March 2008
Students paste Anti-referendum Posters
All Kachin Students Union (AKSU) pasted yesterday (March 25, 2008) about 600 A-4 sized anti-constitutional referendum posters in the two major cities in Kachin State, Northern Burma --- Myitkyina and Waingmaw
Posted by YeKyawAungMDY at 1:26 PM
In the past few monthsamajor rift has emerged within Burma’s military government over the country’s political future. At the centre of the conflict is who should control the roadmap _ Burma ’s plans for political change.
As the war between these two groups begins to escalate, Gen Than Shwe’s rapidly deteriorating health has effectively left the country withoutareal leader. The result is total inertia in government administration andagrowing fear that one of the contesting factions may launcha‘’soft coup” in the near future, according to Burmese military sources.
Posted by YeKyawAungMDY at 10:30 AM
The arrests of ABFSU leaders in Burma
Ko Kyaw Ko Ko and Ko Nyan Lin Aung have been arrested by SPDC junta 16 June, 2008!!
ကိုကျော်ကိုကို တို့ကို ဖမ်းဆီးလိုက်လို့ ဗကသ လှုပ်ရှားဖွဲ့စည်းမှု အရှိန်အဟုန် ရပ်တန့်သွားမှာ မဟုတ်ပါ၊ မကြာခင် ကိုကျော်ကိုကို ပေါင်းမြောက်မြားစွာ ခေတ်အခြေအနေပြောင်းလဲဖို့အတွက် အလျင်အမြန်မွေးဖွားလာအုံးမှာပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဟာ နအဖ ရဲ့ နောက်ဆုံး အသက်မျှင်းမျှင်းကျန်နေတဲ့ ကြိုးစကိုဖြတ်ဖို့ STRONG VOTE NO REFERENDUM
Posted by YeKyawAungMDY at 12:54 AM
ကိုဗမာပြည်သားဆီမှ ကူးယူပြီး ဖြန့်ဝေထားခြင်းပါ....
၁၀နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်လေးတစ်ဦးက အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ သူ့ရဲ့ မောင်ငယ်လေးကိုချီပြီး ဘက်စ်ကား ဂိတ်မှာ ပိုက်ဆံလိုက်တောင်းနေတဲ့မြင်ကွင်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တာပါ။ ဒီမြင်ကွင်းဟာ ကျွန်တော့အတွက် မနက်တိုင်းမြင်နေရပေမယ့် ဘယ်တော့မှတော့မရိုးသွားပါဘူး။ ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုး မြင်ရရင် ရင်ထဲက ကိုပိုနာလာတယ်။ ဒီအရွယ်ကလေးလေးတွေဟာ စာသင်ခန်းထဲမှာ ရှိရမယ့်အချိန်၊ နွေးထွေးတဲ့ မိဘရဲ့ ရင်ခွင်မှာ ရှိရမယ်အချိန်မှာ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင်ကို ဒုက္ခတွေ ခံစားနေရတယ်။ ဒီလိုကလေးလေးတွေဟာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့မပြောနဲ့ စီးပွားရေးမြို့တော် ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ဟောင်းမှာတောင် အများအပြားပါပဲ။ ဒီလိုကလေးလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ဘယ်လိုရှိမလဲ…..? နောက်ပြီး သူတို့ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲ…? ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာရော ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိမလဲဗျာ….?
Posted by YeKyawAungMDY at 10:25 PM
....ကျနော်ဟာ ဒီကဗျာလေးနဲ့ ပဲရှင်သန်ကြိုးစားနေတယ်......
Thank you Thailand and other orgs because of what I want to be!!!
ထိုင်းဆိုတာ ယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့ကြတယ်၊ တစ်ခြားလူမျိုးတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ရန်လိုတဲ့စိတ်လည်း မရှိကြဘူး၊ တစ်ချို့ကပြောကြတယ်...
လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်လာလို့ပါလို့ ပြောကြတယ်....ကျနော်တော့ အဲလိုမထင်မိပါ.....ကျနော် သိမိခင်မိခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေက စိတ်ထားသိမ့်မွေ့နူးညံ့ကြတယ်.....ရင်ထဲကကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်....Thank You Thailand!!
Posted by YeKyawAungMDY at 6:19 PM
Memorial day of Phone Maw or Human rights day in Burma
Posted by YeKyawAungMDY at 5:49 PM
Mon students, youth and monks oppose referendum
Loa Htaw, IMNA
Mon university students, youth and monks have started distributing pamphlets opposing the Burmese military junta's referendum in Moulmein, Mon state, said local residents.
Spreading the word the dissidents are encouraging people to oppose the draft constitution without fear, saidatownship civil society youth leader.
"The pamphlet advocates opposing the referendum. If we do not oppose the referendum, the regime will continue in power and oppress the people. The government will be providedalicense to repress the people further if the constitution is approved throughareferendum," he said.
The pamphlets also urged the military regime to stop perpetrating violence and abusing people, he said.
The pamphlets have been distributed among monks, students and youth. But the distribution is not wide spread enough yet, he added.
The New Mon State Party (NMSP) has not supported the Burmese military government's constitutional process either. The regime had announced that the referendum will be held in May this year while elections would be held in 2010. The constitution effectively excludes ethnic groups and rules outafederation.
The NMSP believes Burma's political problems can only be solved throughatripartite dialogue which includes ethnic and opposition parties as well as the Burmese military government.
The Mon National Democratic Front (MNDF) which contested in the Burma 1990 election also said the ensuing referendum and election is just to prolong and extend the junta's grip on power.
Posted by YeKyawAungMDY at 9:06 PM
တိုင်းရင်းသား ငြိမ်းအဖွဲ့များ စစ်အာဏာရှင် သက်စိုးရှည်ရေး ခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီကဲ့သို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ကြ.....
......မွန်ပြည်သစ်ပါတီဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားပေမယ့်....မွန်ပြည်သူ လူထုအကျိုးအတွက် အမှန်တကယ်ရပ်တည်တဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်တယ်.....နအဖ ရဲ့ အခြေခံဥပဒေဆန္ဒခံယူပွဲကို လုံးဝသဘောမတူဘူး၊ သူတို့ရဲ့ သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ပြီးကန့်ကွက်နေပြီ.....တခြားတိုင်းရင်းသားငြိမ်းအဖွဲ့များက မွန်ပြည်သစ် ပါတီကဲ့သို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ကြ.....
Download ပြည်တွင်းထုတ် ဒို့ခေတ်ဂျာနယ်
ဂျိုးဖြူ ငှက်တစ်ကောင် လန့်ဖြတ်ပျံပြေး
လွပ်လတ်ခွင့်ကို ဆာလောင်တယ်။ ။
Posted by YeKyawAungMDY at 10:45 PM
Human Rights Day (Myanmar) and Vote-No Pamphlet (forwarding)
This is created by U Aung Thu San
Posted by YeKyawAungMDY at 6:53 PM
redescribing the Saffron's Revolution Pictures from "WinVblog"
Redescribing these pictures from http://wimvblog.blogspot.com/2008/01/burmamyanmar.html
Posted by YeKyawAungMDY at 2:51 PM
Mr Creator ၏ ဖန်တီးမှု
Posted by YeKyawAungMDY at 9:09 AM
....ကျနော်ဟာ ဒီကဗျာလေးနဲ့ ပဲရှင်သန်ကြိုးစားနေတယ်.....
Memorial day of Phone Maw or Human rights day in B...
တိုင်းရင်းသား ငြိမ်းအဖွဲ့များ စစ်အာဏာရှင် သက်စိုးရ...
Human Rights Day (Myanmar) and Vote-No Pamphlet (f...
redescribing the Saffron's Revolution Pictures fro...